Matanjaka Hatrany Ny Mozikan’ny Fifaharana Ao Ethiopia, Na Dia Eo Aza Ny Famoretana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jolay 2017 5:10 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, አማርኛ, Ελληνικά, Español, Français, English
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin-kira iray manjoretra an'i Teferi Mekonen, nahazo mpijery mihoatra ny 200.000 avy ao amin'ny vondron'ny fantsona YouTube.
Efa hatry ny ela no niharan'ny fampidirana am-ponja sy ny fiampangana fampihorohoroana ny mpanao gazety sy ny bilaogera ao Ethiopia, raha nalalaka anefa ireo mpanakanto hatramin'izay dia tsy izany intsony no nitranga vao haingana.
Nandritra ny herintaona, nameno ny zorokelin'ny aterineto Ethiopiana ilay antsoin'ny mpikatroka hoe “hiran'ny fifaharana“. Koa satria lasa niseho bebe kokoa teo amin'ny fiainam-bahoaka sy ny aterineto ny hira ara-politika, dia nitarin'ny manampahefana Ethiopianina tany amin'ny mpanakanto izay hitan'izy ireo ho mpanohana ny mpanohitra ny tetika famoretana ara-politika.
Nanomboka tamin'ny Desambra 2016, nosamborina sy nampidirina am-ponja ireo mpiangaly mozika malaza Ethiopiana maro izay nifanaraka tamin'ny hetsiky ny mpanohitra miroborobo ao amin'ny firenena. Tamin'ny volana lasa, voampanga tamin'ny fampihorohoroana noho ny tononkira “mandrangitra” sy ny fandefasana ny lahatsarin-kiran'izy ireo tao amin'ny YouTube ny tarika malaza an'ilay mpihira vao misondrotra Seenaa Solomona.
Nitombo tao anatin'ny drafitry ny governemanta Ethiopiana tamin'ny fanitarana an'i Addis Abeba, renivohitry ny firenena, ny tontolon'ny fifandirana ara-politika izay nitrangan'ireo fisamborana ireo. Tamin'ny taona 2014, ny antoko fitondrana EPRDF dia nanambara drafitra fanitarana ny renivohitra hifanila amin'ny toeram-pambolena Oromia, izay faritra lehibe indrindra ao Ethiopia ary fonenan'ny vondrom-poko lehibe indrindra ao amin'ny firenena, ny Oromo.
Nitarika hetsi-panoherana lehibe sy herisetra famoretana avy amin'ny governemanta ny drafitra, ary niafara tamin'ny fanambarana ny hamehana tamin'ny Oktobra 2016, ary mbola manankery amin'izao fotoana izao. Misy milaza fa nitondra fahatoniana taorian'ny korontana ara-politika nandritra ny roa taona ny hamehana, izay nitarina efa-bolana indray tamin'ny volana Martsa 2017 .
Mbola mitohy tsara hatrany ny fihetseham-po sy ny fitantarana ny fanoherana na dia mety hampiato ny fihetsiketsehana aza ny hamehana. Ary nanomboka niseho miharihary sy nampiaka-peo ny mpiangaly mozika Afan Oromo (fiteny ao amin'ny faritra) ka niteraka aingam-panahy ho an'ny hetsiky ny mpanohitra.
Ho an'ireo Oromos, efa hatry ny ela no tao am- pon'ny hetsika ara-politikan'izy ireo ny hiran'ny fifaharana. Na dia izany aza, lasa nihamafy sy naneho hatezerana kokoa tamin'ny tononkira ny ‘hiran'ny fifaharana’ nandritra ny volana vitsivitsy farany, ary nihamaro ny mpanaraka izany. Ary taty aoriana, na dia ny mpihira Amharic aza izay tsy nihira ampahibemaso ny hira ara-politika aza dia nanatevin-daharana ny hiran'ny fifaharana. Namoaka hira Amharic malaza izay nahitana azy niangavy ny miaramila Ethiopiana mba hanatsahatra ny famonoana olona ilay mpihira Amharic malaza Yehune Belay.
Niforona ny fantsona YouTube maro sy pejy Facebook maro izay nitatitra ny lafiny ara-kolontsaina tamin'ny hetsi-panoherana. Namoaka ny hiran'ny fifaharana matetika ny tranonkala sy bilaogy .
Tao amin'ny YouTube, nahazo mpijery an'hetsiny tsy tapaka ny fantsona nitondra ny sary voarindra mampiseho ny hetsi-panoherana izay mifandray amin'ny hiran'ny fifaharana .
Addis Ababa amin'ny faramparan'ny tolakandro. Sarin'i Amanda Lichtenstein.
Ivelan'ny aterineto, anisan'ny andiana mpivarotra tsy ara-dalàna mamatsy ny hiran'ny fifaharana ho an'ny Ethiopiana tsy manana fahafahana miditra amin'ny aterineto ny mpivarotra CD eny an-dalana sy ny fivarotana kely fanofana CD .
Niezaka tamin'ny fomba rehetra ny governemanta mba hanivanana ny ‘hiran'ny fifaharana’. Nosamboriny ny mpihira, ary tsy navelany hanao fampisehoana ary nisy mihitsy aza ny noroahana hiala tao Ethiopia. Nosakanany ny fantsona YouTube sy ny fahitalavitry ny zanabolana any am-pielezana.
Kanefa toa vao maika mampitombo ny lazan'ny hiran'ny fifaharana ny paikadin'ny governemanta amin'ny famoretana ireo mpihira mpanao fanakianana. Ohatra, nahazo mpijery maherin'ny 3.525.996 ny Yai Gulalle Film, fantsona YouTube tantanan'i Seena Solomon sy ny mpiara-miasa aminy talohan'ny nisamborana azy ireo.